घरबेटीका लागि आचारसंहिता, कक्षा नलिए नक्सा पास नहुने | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← बेलायतमा बलात्कारपछि नेपाली महिलाको हत्या
दूतबिनाका दूतावास थपिँदै →
घरबेटीका लागि आचारसंहिता, कक्षा नलिए नक्सा पास नहुने
२२ जेठ, काठमाण्डौं । के तपाई महँगो भाडा तिरेर बहालमा बसिरहनुभएको छ ? घरबेटीले महँगो बहाल लिएर पनि पर्याप्त पानी, बिजुलीलगायत सुविधा उपलब्ध गराएका छैनन् ? यस्ता समस्या भोगिरहनुभउको छ भने पर्खनुस् । अब सहरी विकास मन्त्रालयले घरधनी र बहालमा बस्नेका सेवा, सुविधा र सर्तसहित आचारसंहिता बनाउँदैछ ।
जनताका गुनासा सुन्न सरकारले सुरु गरेको ‘हेलो सरकार’ मा घरबेटीले महँगो भाडा लिएर पनि पर्याप्त पानी, बिद्युतलगायत सुविधा उपलब्ध नगराएका र उल्टै दुःख दिएका गुनासा बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मन्त्रालयले घरबहालसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन लागेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
‘हेलो सरकार’ मा सबैभन्दा धेरै गुनासा घरबहादमा बस्नेले घरबेटीबाट दुःख पाएको आएका छन्,’ मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘डेरामा बस्ने र घर भाडामा लगाउनेबाट धेरै गुनासा आउन थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गराउन शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पार्दै छ ।’ मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार घरबाहलसम्बन्धी अधिकांश गुनासा घरबेटीले पर्याप्त पानी नदिने तर महँगो भाडा लिने, पटकपटक बढाउने र बहालमा बस्नेसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने लगायतका छन् ।
नपढे घरको नक्सा पास नहुने
नगरक्षेत्रमा मापदण्ड अनुसारका संरचना निर्माणका लागि नक्सापासपूर्व सम्बन्धित धनीले कक्षा लिनुपर्ने भएको छ । उक्त कक्षामा घर निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, निर्माण गर्ने तरिका र नगरपालिकाको नियम’bout जानकारी गराइन्छ । कक्षामा सहभागी नहुनेको नक्सा पास नहुने भक्तपुर नगरपालिकाले जनाएको छ ।
भक्तपुरले नक्सा पासमा कडाइ गरे पनि सँगै जोडिएको मध्इपुर नगरपालिका क्षेत्रमा नक्सा पास नै नगरी संरचना बन्ने गरेको छ । संरचना निर्माणपछि गैरकानीनी रुपमा नक्सा पास गर्ने प्रचलन रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
मध्यपुरका कार्यकारीले नगर विकासभन्दा आफू अनुकुल काम गरेकाले सहर कुरुप भएको नगरबासीले आरोप लगाएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । नक्सा पासमा कडाइ नगर्दा लाखौ रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व पनि हिनामिना भएको छ । सुरक्षित क्षेत्रमा प्लानिङ गरेर घर बनाउँदा पनि नगरपालिकाले रोक्न सकेको छैन् । आर्थिक लेनदेन भएकै कारण नियमविपरीतको काम रोक्न चासो नदिएको आरोप दलहरुले लगाउन थालेका छन् ।